Nhau - Isu tinotarisa pakuvaka yakakwira timu timu
Isu tinotarisa pakuvaka yakakwirira timu timu
Kukosha kwaNingbo Zodi kuri kuvaka timu yechikwata chepamusoro .Takabata rwendo rwemazuva maviri rweMaoyang County, Xiangshan musi waAugust 20, mukati memazuva ataifara zvinonaka zvegungwa uye kushambira pamahombekombe. Tora zororo kubva pabasa rako rakabatikana kuti unakirwe nerunyararo rwechisikigo.Tinogara zuva rese kubva mangwanani kusvika manheru nevatinoshanda navo uye nemhuri, tichinakidzwa nehupenyu hunofadza padivi peanoshanda.
Imwe kune rumwe ruoko, timu ichagovana zvakasiyana zvigadzirwa ruzivo kune vese vashandi vanoshandisa PPT uye sampuro inoratidza, zvakare koka nyanzvi dzemafekitori kusimudzira ruzivo rwakawanda (kusanganisira zvinhu, tambo yekugadzira, tekinoroji yekugadzira, nzira dzekuyedza, kurapwa kwepamusoro, kurongedza, kuendesa, mutengo nezvimwe. …) .Panguva yekuratidzira chiyero, inovandudza ruzivo rwedu rwehunyanzvi uye nekuvandudza kuzvivimba kwedu.
Zvinotambirwa zvakanyanya kuti kushanda zvakazvimiririra kune mukana uri pachena wekuti inogona kuratidza kugona kwako. Nekudaro, ini ndinotenda kuti kubatana kunonyanya kukosha munharaunda yemazuva ano uye mushandirapamwe weboka rave hunodiwa hunodiwa nemakambani anowedzera.
Pakutanga, isu takagara munharaunda yakaoma uye tinowanzo sangana nematambudziko akaomarara ayo anopfuura nekugona kwedu. Kunyanya panguva ino kubatana kunoratidza kuve kwakanyanya kukosha. Nerubatsiro rwechikwata, aya matambudziko anogona kugadziriswa zviri nyore uye nekukurumidza, izvo zvinogona kuvandudza mashandiro ebasa.
Panzvimbo yechipiri, kushanda pamwe chete kunopa mukana wekushandira pamwe newavanoshanda naye, kuchaita hushamwari uye hunonakidza nzvimbo yebasa, chinova chinhu chakakosha chinokanganisa kutenda kwevashandi mukambani senzvimbo yekushandira yakanaka.
Chekupedzisira, kubatana kunobatsira mukubudirira kwemakambani. Neruzivo rwevashandi vese rwakabatanidzwa, makambani ane kugona kushanda kwakanyanya uye kugona kubata chero matambudziko. Nekuda kweizvozvo, makambani anogona kuita purofiti yakawanda uye kukura nekukurumidza.
Muchidimbu, kubatana kunokosha, hapana aigona kurarama zvakasiyana, vanofanira kuvimba nevamwe mune imwe nzira. Nekudaro, kushanda pamwe chete kunogona kuita kuti hupenyu huve nyore. Kuzadzikisa zvido zvekuvandudzwa kwevanhu pachedu uye neruzivo rwevanhu. Tinofanira kudzidza kushandira pamwe nekugadzirisana kune mumwe nemumwe. Nenzira chete iyi tinogona kubudirira uye kuzvigutsa isu pachedu nzanga.